Baayyeen Siyaade Tolaa Koo - Xalayaa Jaalalaa
Tolaa fi Talilee
Kanan hedduu jaaladhuu jaalallee koo Tolaa dhaf.
Tolaa ko akkam naaf jirta? Fayyaa keeti? Haala atii keessa jirtu beeku baadhuus, yeroo mara akkan sijaaladhu siif ibsuun barbaada. Rabbii jedhee hanga ijaan wal arginee waan keessa garaa keenyya mari’aannuttii nu lamaanu jaalala nukeessa jiruu ukkamsinee walii wajjiin rakkanna.
Tolaa koo jireenyaan akkam? Boqannan hoo? Erga gargar baane waggaa tokko guutuf jenna. Baayyeen siyaade Tolaa ko. Garuu maalif akkasittii baddee? Maaf garaa nattii jabaatte? Wa’ee koo akka siif hin taane nan beeka, nadhabdee guyyaa tokko buluu hin dandeessu ture. Sababa barumsaatiin gargar baane. Semester tokkoffaatti boqonna booddee nan dhufaa jettee waada naa galtee otuu sittii hin toliin haftee. Tarii, rakkateetu jedheetuman dhiise. Amma moo baruumssii cufamee boqonnaa dhaaf maatii keetittii galtee achumaan hafte.
Haadhaf abba kee akka ittii yaaddu nan beeka. Garuu maalii yoo gidduttii dhuftee nagaa nagaafatte? Tolaa koo, ammam akka sijaaladhu fi bakka akkamii akka anii siif qabuu otuu beektuu akkasittii garaa nattii jabaatte baduun kee tarii waan tokkoo rakkatteetu jedhee akka yaadu nataasise. Sababni isaas atii ana dhiiste ammana na obsitee teessa nattii hin fakkaatu. Jaalalle koo jaalala dhugaa kanii ijoolumma dhan jalqabne sana. Ijjoolumma keenyan yeroo kutaa 9 barannuu wal barre. Badiyaarra deddeebitee yeroo barrattu, manni keenyya immo nannoo mana baruumssa mana kireefachu barbaadde mana keenya kireefatte galte. Haala akkasiitin wal barree.
Barataa cimaa fi kan ofittii boontu waan taateefin sijaaladhe. Maatiin keenyallee baayyee sikabajuu. Tolaa koo, anii qabtiin na dhufuu didee asuma magaala Ginchittii barachaan jira. Atii immo qabxiin sii dhufee University Jimma galte. Erga deemte otumaa walii bilbilluu otumaa walii barreesinuu akkuma sila sin jedhe boqonnaa dhaaf maati keetitti galte deebi’uu diddee.
Nama jaalatan obsanii waggaa tokko ta’uun hin ulfaata. Tola koo anoo obsuun dhadhabee. Maaloo yeroo tokko koottu ijjumaa keesan silaala yoom akka wal agarruu hawwaan jira. Sin Jaaladha!
Akkuma xalayaa kana dubbifteen yoo dandeesse naa bilbilii. Yoo ta’uu baate immoo koottuuti anuma gammachiisu dhaf ijjuma keen silaala koottuu yeroo tokko na dubbisii sin jaaladha.
Jaalallee kee Taliilee magaala Ginchiirra.
Jaalalee koo Tola godina Shawa Lixa aana Jalduutti kan argamuuf.
Tolaan akka Xalayaa kana arguu mee #Share godhaa Taliilee gammachiisa!
baayyee namattii tola galatooma aadaan afaan guddisuu kun cimee itti haa fufuu
namatti tolaa baayye itti gammadeee tolaan dhagahee taanan akka siif dhufuu abdiidhan qabaa